Olee otu ịhazi Windows kọmputa: usoro nkuzi site na ntinye. | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | Hardware, Nkuzi
Ọrụ ị ga-arụ n'oge ụfọdụ bụ ịkpụzi kọmputa. Mathazi draịvụ ike na-agụnye ihichapụ ihe niile echekwara na ya. Ọ bụ usoro nke nwere ike ịdị mkpa ịrụ n'oge ụfọdụ akọwapụtara. Ma, enwere ndị ọrụ amachaghị etu esi eme ya.
Ya mere, n’okpuru anyị gosipụtara gị usoro ị ga - eso usoro kọmputa Windows. Otu uru dị ukwuu bụ na anyị nwere ụzọ dị iche iche esi eme ya. Yabụ ị nwere ike ịchọta nke kachasị dabara na ihe ị na-achọ n'ọnọdụ nke ọ bụla.
Dị ka anyị kwurula, n'okwu a anyị lekwasịrị anya usoro kọmputa Windows. Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ bụ usoro a MacNa njikọ nke anyị hapụrụ gị, ị ga - ahụ otu esi eme ya ma ọ bụrụ na kọmputa gị sitere na Apple. Otu n’ime ajụjụ mbụ ọtụtụ ndị ọrụ nwere bụ ihe kpatara eji eme ya. Anyị ga-aza ajụjụ a n'okpuru.
1 Kedu ihe kpatara eji kee kọmputa?
2 Mee nkwado ndabere
3 Hazie Kọmputa gị: Quickzọ Ngwa Ngwa na Windows
4 Hazie iji Disk Manager
5 Hazie idebe faịlụ gị
Kedu ihe kpatara eji kee kọmputa?
Ihe kpatara ịhazi kọmputa nwere ike bụrụ ihe dị iche iche. N'otu aka, ọ bụ ihe anyị na-eme ọ bụrụ na enwere ụfọdụ nsogbu siri ike na akụrụngwa ahụ. N'ụzọ dị otú a, mgbe ị na-ahazi ya, a na-ehichapụ ihe niile dị na ya ma ọ dị otu ọnọdụ dịka mgbe anyị zụrụ ya. Ihe na-enyere ya aka ịrụ ọrụ nke ọma ọzọ, na-adịkarị. Enwere ike ịme gị mgbe ị bu nje virus, nke ị nweghị ike iwepụ.
Ma ọ bụrụ na ọ bụ kọmputa na-agba ọsọ, mgbe ụfọdụ enwere ndị ọrụ ndị nzọ na usoro a. Ma ọ bụ ọ bụrụ na i kpebiri iresị kọmputa gị, ịhazi ya na-egosi na enweghị data ma ọ bụ faịlụ ga-anọgide na ya. Ya mere, onye zụrụ ya agaghị enwe ike ịnweta ha.
Ma ọ dị mkpa icheta na ịhazi kọmputa gụnyere faịlụ niile dị na ya ga-ehichapụ. Yabụ na ọ bụ usoro ime ihe ike, na anyị ga-emerịrị n'aka na ọ bụ azịza dị mkpa n'ọnọdụ anyị.
Mee nkwado ndabere
Ya mere, tupu anyị amalite ịkpụzi kọmputa, ịkwesịrị ime nkwado ndabere nke faịlụ niile. N'ụzọ dị mwute, ịkwado dị mfe, nakwa na anyị egosila gị. N'ihi ya, ọ dị mkpa ime nke a, ọ bụrụ na ịchọghị ida faịlụ ọ bụla dị na kọmputa gị n'oge ahụ.
Na nhazi nke komputa Windows anyi nwere ihe puru iche mee nkwado ndabere na mfe ụzọ, ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows 10. Ya mere, ọ bụ ihe i nwere ike ime aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ohere ịme ihe mmemme ịntanetị iji nyere gị aka na usoro a.
Hazie Kọmputa gị: Quickzọ Ngwa Ngwa na Windows
Iji usoro kọmputa anyị nwere ụzọ dị iche iche. Otu n'ime ụzọ, nke pụtara n'ihi ịdị ngwa ngwa, E webatara ya na Windows 7. Ọ ka dị ugbu a na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ma ha na-enye anyị ohere ịme usoro a n'ụzọ dị mfe. Enweghị mkpa ịwụnye mmemme ndị ọzọ na kọmputa gị.
Ihe anyị ga-eme, ozugbo anyị mechara ndabere nke kọmputa ahụ, bụ ịga na folda My Computer. N'ime ya, ihe niile draịvụ ike anyị arụnyere na kọmputa. Anyị ga-achọta nke anyị chọrọ ịhazi n’oge a. Ozugbo ị chọtara, pịa ya na bọtịnụ aka nri aka nri.
Na-esote, ị nweta nchịkọta nhọrọ nhazi na usoro nke nhọrọ na ihuenyo. Otu n'ime ha bụ ka hazie ya, nke anyị ga-pịa. Anyị ga-enweta windo nwere data gbasara nhazi, yana na ala bọtịnụ mmalite. Pịa bọtịnụ na usoro nhazi ga-amalite.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụzọ a iji hazie kọmputa Windows dị mfe. Agbanyeghị, ọ dị mma icheta nke ahụ enweghị ike ịme usoro a na draịva ebe arụnyere sistemụ arụmọrụ na ị na-eji n'oge ahụ. Ọ bụrụ na ị nwaa, ozi ga-egosi na ihuenyo ga-agwa gị na ọ gaghị ekwe omume.
Hazie iji Disk Manager
Usoro ọzọ dị na Windows, nke bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na ịnwe ọtụtụ draịva ike na kọmputa gị, bụ iji njikwa disk. Usoro ahụ adịghị mfe dịka na nhọrọ gara aga. Ya mere, ọ bụ usoro e mere maka ndị ọrụ ahụ nwere obere ahụmịhe. Agbanyeghị, ozugbo ị gụrụ otu o si arụ ọrụ, okwesighi ịbụ ihe mgbagwoju anya.
Iji nweta Disk Manager, ị ga-pịnye diskmgmt.msc ma ọ bụ Nchịkwa Diski na nyocha ọchụchọ. Nhọrọ a ga-egosi na ihuenyo. Ga-ahọrọ nhọrọ a na-akpọ Mepụta na usoro draịvụ draịva nkebi. Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike ịnweta site n'okporo ụzọ a: Ogwe njikwa> Sistemụ na nchekwa> Ngwaọrụ nchịkwa.
Ọzọ anyị na-elele na diski anyị chọrọ ịkpụzi dị na ihuenyo. Dabere na nha ya, anyị ga-eji ụdị nkebi dị iche na nke a. Ọ bụrụ na ọ dị elu karịa 2 TB anyị ga-eji GPT. Ebe ọ bụrụ na ọ pere mpe karịa ego a, anyị ga-eji MBR. Mgbe anyị chọtara diski ahụ, pịa nri na oghere adịghị ekewa nke disk ahụ. Wee họrọ nhọrọ a na-akpọ Mpịakọta Dị Mfe Ọhụrụ. Wee họrọ oke nke nkebi na MB na leta ị ga-enye diski ọhụrụ a.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịkpụzi diski ahụ. Naanị pịa aka nri na draịva na ajụjụ ma họrọ nhọrọ usoro. Ọ na-enye anyị ohere ịkpụzi diski dum ma ọ bụ naanị nkebi, ị nwere ike ịhọrọ ihe ga-adịrị gị mma na nke ahụ. Usoro a na - enyere anyị aka ịhazi kọmpụta, agbanyeghị na nke a, anyị na - aga site na otu rue na otu.
Hazie idebe faịlụ gị
N'ikpeazụ, ụzọ iji hazie kọmputa Windows 10, mana ịdebe faịlụ gị. Nke a bụ usoro dị ugbu a na ụdị kachasị nke sistemụ arụmọrụ. Ekele dịrị ya, ihe anyị na-eme bụ weghachite kọmputa na nke mbu ya, ma na-enweghị ihichapụ faịlụ ndị anyị nwere na ya. Ya mere, e gosipụtara ya dị ka nnukwu nhọrọ iji tụlee.
Iji mee nke a, anyị na-abanye na nhazi Windows 10. Mgbe ahụ, anyị ga-enyerịrị ngalaba mmelite na nche, nke na-abụkarị otu n'ime ndị ikpeazụ na ihuenyo ahụ. N'ime ngalaba a, anyị na-ele anya na kọlụm n'aka ekpe. Site na nhọrọ ndị dị ebe ahụ, pịa na mgbake.
Ọzọ, otu nhọrọ a na-akpọ Tọgharia PC ga-egosi na ihuenyo. Ọ bụ nke masịrị anyị n'okwu a. Ya mere, pịa na mmalite iji malite usoro. Ihe na-esote ga-ajụ bụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ na-faịlụ ma ọ bụ. Anyị na-ahọrọ nhọrọ anyị chọrọ na usoro ahụ ga-amalite. Yabụ, ihe anyị na-eme bụ ịkpụzi kọmpụta, mana enweghị faịlụ ndị anyị nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Esi usoro kọmputa
Victor Solis: p rịba ama
Rite uru na ọnụ ala nke ngwaahịa Koogeek nke Amazon